Welcome to Laascaanood online
Hadaan nahay bahda Laascaanood online Waxaan idiin balan qaadaynaa inaan idinka haqab tirno wixii warar ah ee ka dhacaya aduunka dacaladiisa !
LAASCAANOOD NEWS AROUND THE WORLD
Wararka Somalida Maanta
Ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe ee magaalada Laascaanood oo 40% kor u kacday sanadkii la soo dhaafay.
© Laascaanood online
Isbitaalka Dhexe ee Laascaanood
Laascaanood,10 Feb 2003 - Gudoomiyaha wabarashada ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Dalmar oo ka warbixinayey halka ay maryaan hawlaha waxbarashada ee gobolka Sool,ayaa waxa uu xaqiijiyey in baahida waxbarasho ee gobolku ay ka soo badanayso sanadba sanadka ka danbeeya,arintaas oo keentay in ay buuxsamaan iskuuladii,oo ay galaas walba fadhiyaan arday ka badan 3 jeer intii loogu tala galay.Ardayda qaar ayaa waxay fadhiistaan dhulka,qaarna waxayba tagaan guryo aan iskuulada ahayn oo ah guryo loo kireeyey ardayda si wax loogu baro
Waxaa magaalada Laascaanood ka jira 5 dugsi hoose iyo hal dugsi sare,waxaa iyaguna jira jira dugsiyo diineed oo aad u fara badan,waxaana dugsiyadaasi horumar xoog leh sameeyeen kadib markii la aasaasay gudiga taakulaynta ee SSH,gudigaas oo ay sameeyeen jaaliyadaha dibada ee ka soo jeeda deegaankaasi.
Sida uu xaqiijiyey Mr Dalmar,waxa sanadkii la soo dhaafay ay ardayda dugsiyada hoose ee magaalada Laascaanood ay kor u kaceen 40%,taasoo muujinaysa sida ay u soo badanayso baahida loo qabo in la sameeyo iskuulo cusub iyo in la helo dhaqaalo lagu dar dar geliyo hawlahaas.
Carqabadooyinka ugu waaweyn ee hor taagan gudiga waxbarashada ee gobolka Sool,waxay tahay iyada oo ay 13 sano ee ugu danbeeyey ay dad qaxooti ahi ku jiraan dugsigii Hoose Dhexe ee Laascaanood,balse waxaa hada dadaal dheeraad ah loogu jiraa sidii dadkaas qaxootiga ah looga saari lahaa dhismayaasha dugsiga,loona dejin lahaa meelo kale.
Magaalooyinka Laascaanood,Ceerigaabo iyo Buuhoodle ayaa waxaa 13kii sano ee ugu danbeeyey soo galay dad aad u fara badan oo ka kala yimid deegaamada kale ee soomaaliya,sida Muqdisho,Hargeysa,Kismaayo iyo Burco,dadkaas oo miciin soo biday meelihii ay ka soo jeedeen awowyaashoodii hore kadib dagaalkii sokeeye,magaalooyinkaas ayaa hada 4 jeer ka weyn sidii ay ahaayeen dagaalka sokeeye ka hor.
Dadaal dheeraad ah oo loogu jiro sidii gobolada SSH loogu samayn lahaa maamul madaxbanaan.
Laascaanood,10 Feb 2003 - Waxaa maalmahan laga dareemey magaalada Laascaanood dhaqdhaqaaq iyo shirar gooni gooni ah oo loogu ololaynayo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan deegaamada SSH,iyadoo deegaamadaasi ayan lahayn maamul dhexdhexaad ah,balse waxa wakhtiyadii ugu danbeeyey ka jirey degaamadasi dadaal weyn oo loogu jiro sidii ay u samaysan lahaayeen maamul ay ku midaysan yihiin dadka deegaanku,isla markaana ka madaxbanaan labada maamul ee Puntland iyo Somaliland.
Culumaa,udiinka magaalada Laascaanood oo ay ka midka yahay wadaadka sida aadka ah looga qadariyo deegaankaas ee Sheekh Aadan Weli,iyo Sheekha kale ee Sheekh CabdiNaasir Farey iyo qaar ka mid ah garaadada beesha oo u ka mid yahay Garaad Cali Buraale ayaa waxay ugu baaqeen shacabka in dib la isugu yimaado si loo wada tashado,waxayna ugu baaqeen shacabka in ugu horeyn la samaysto alabari weyn,alabarigaas oo loogu gogol xaadhayo shir ay isugu yimaadaan dadka ay khusayso arinta gobolku.
Dhaqdhaqaaqan cusub oo markii lagu dhawaaqay ay dadka qaarkiis markii hore ka biyo diideen,iyagoo ka shakiyey in koox gaar ahi wadato,ayaa markii la ogaadaday in ay arintan u ololaynayaan culimadu,ayaa dhamaan shacabku magaaladu u istaageen sidii ay u tageeri lahaayeen,iyagoo isla markiiba bilaabay inay ururiyaan dhaqaalihii lagu hawl gelilahaa.
Deegaamada Sool,Sanaag iyo Hawd ayaa waxay ka duwan yihiin deegaamada kale ee Puntland iyo Somaliland,maamuladaas oo midba midka ka sheeganayo inuu isagu xaq uga leeyahay inuu maamulo deegaamadaas,iyadoo shacabka degaamadaasina ay aaminsan yihiin inay yihiin dad madaxbanaan oo aan cidna hoos tegin.
Xaalada nabadgelyo ee magaalad Laascaanood ayaa aad u wanaagsan,iyada uu yaraaday iska horimaadkii dhexmari jirey kooxaha iska soo hor jeeda ee kala taageersan labada maamul.
Aalada Internetka oo laga hirgelinayo magaalada Laascaanood.
LAASCAANOOD,SOMALIA,10 FEB 2003-Shirkada lagu magacaabo Telecom oo ah shirkad ku hawlan hawlaha isgaadhsiinta ayaa waxay beryahaanba ku hawlanayd sidii ay uga hirgelinlahayd internetka magaalada Laascaanood.
Shirkadan ayaa waxay kaga duwan tahay shirkadii hore ee taleefoonada Somtel iyadoo ay macaamiisheedu ku dirsan doonaan qiimo jaban taleefoonada ay u dirayaan eheladooda joogta wadanka gudihiisa iyo dibediisaba,isla markaana ay si fudud qalabka internetka iyo mobilephonka ugula xidhiidhi doonaan aduunka.
Shirkadan cusub ayaa waxay xaflad qaban doonaan maalinta iida ee berito ah,xafladaas oo ah xafladii furitaanka hawlaha shirkada,arintan ayaa waxay fududayn doontaa inaad si fudud ula xidhiidhid eheladaadii adigoo isticmaalaya qalabka internetka.
Ergada loo xil saaray hirgelinta gobolka Hawd oo booqday meelo badan.
Buuhoodle,Somalia,10 Feb 2003-Shacabka ku dhaqan deegaamada Hawd ee dalka soomaaliya ayaa waxay u ololaynayaan sidii ay deegaankaasi loogu samayn lahaa maamul iyo weliba in deegaankaasi noqdo gobol ka mid ah gobolada soomaaliyeed.
Gudi ka kooban 20 xubnood oo loo saaray sidii ay u hirgelin lahaayeen hawshaas balaadhaan ayaa beryahaanba booqasho ku kala bixinayey meelo badan oo ka mid ah deegaamada lagu wado inay hoos yimaadaan maamulka gobolka Hawd.
Gobolka Hawd ayaa sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaal ahi waxaa lagu wadaa in ay magaalo madax ay u noqoto meesha lagu magacaabo HORUFADHI oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Buuhoodle. Balse waftigaas markii ay tageen degmada Widh-widh oo ka mid ah meelaha la damacsan yahay inay ka mid noqoto degmooyinka mustaqbalka ee gobolka Hawd ayaa waxa is afgaran waa soo dhex galay maamul horey uga jirey Widh-widh oo lagu magacaabo Golaha Guurtida oo uu madax u yahay keyse Cabdi Yuusuf iyo ergadii Buuhoodle ka timid.
Xooghayaha gudiga gobolka Hawd Mr Gaagaale ayaa u sheegay wariyayaasha in ay isla garteen iyaga iyo odayaasha reer WIDH-WIDH in ay isugu yimaadaan kulan danbe oo lagu qaban doono Buuhoodle dhowaan,kulankaas oo lagu xalili doono khilaafaadka jira.
Qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo u waramay idaacada Laascaanood ayaa waxay ku eedeeyeen gudiga inay ku deg degeen hawshan ah gobol ku dhawaaqida,marka keliya ee gobol lagu dhawaaqi karaana waa xili ay jirto dawlad dhexe oo soomlaaiyeed oo go,aamisa in ay meeshaasi gobol u qalanto iyo in kale,balse kooxahaas isku magacaabay Ururada Bulshada ayaa sida la xaqiijiyey ah kuwo gacansaar la leh xukuumada isku magcawday Somaliland.
Boqor Cabdillaahi oo ka hadlay arintan ayaa sheegay in dhamaan sacabka deegaamada Hawd ay ka midaysan yihiin in ay samaystaan maamul gobol,ayna arintan kala tashadeen maamulka Puntland,wuxuuna boqorku qiray in ay fiicnayd in gudig ay sugaan inta gobolka la magacaabayo,oo laga fiican yahay inaad adigu is magacawdo.
Waxaa iyaguna jira odayaal dhaqameedyo reer Buuhoodle ah oo lagu casuumay dhinaca Hargeysa,taasoo ujeedada loo casuumay ay tahay in khalkhal lagu abuuro sidii arimahani u hirgeli lahaayeen.
Kor u noqo ama Kulaabo Bogga Hore ee Laascaanood online/ Home
Copyright © 2002 by Laascaanood.com.